आज थप ६३४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि «
आज थप ६३४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०७७, शनिबार १८:१८
काठमाडौँ, ६ भदौ । पछिल्लो २४ घण्टामा ६३४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ ह्जार ११७ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दैनिक प्रेस ब्रिफिङको क्रममा पछिल्लो चौबीस घण्टामा १२ हजार ५१९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको बताउनुभयाे । सङ्क्रमितमध्ये १८२ जना महिला र ४५२ जना पुरुष रहेको मन्त्रलायले जनाएको छ । पछिल्लो चौबीस घण्टामा १३६ जना सङ्क्रमित निको भई घर फर्केका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ९ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी, पर्सा, बारा, सिरहा, मकवानपुर र भक्तपुर गरी ६ जिल्लाका ९ जनाको मृत्युको पुष्टि भएको छ ।
यो संगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १४६ पुगेको मन्त्रलायले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो चौबीस घण्टामा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा पाँच जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश २ को पर्सा जिल्लाका तीन जना, बारा र सिरहाका एक-एक गरी जमा पाँच जनाको मृत्युको पुष्टि भएको छ । पर्साका ६१, ५८ र ४८ वर्षीय तीन जना पुरुषको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाराका ५८ वर्षीय पुरुष र सिरहाका ६८ वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ ।
प्रदेश १ को सुनसरीमा एक छ वर्षीया बालिकासहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । अर्का ६७ वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ । दुवै जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । त्यसैगरी बाग्मती प्रदेशमा दुई जना सङ्क्रमितको मृत्युको पुष्टि भएको छ । मकवानपुरका ५६ वर्षीय पुरुष र भक्तपुरका ७३ वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा निधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।
वाग्मती ६ भदौ । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म २९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
मकवानपुरको हेटौँडामा पनि एक महिला र दुई पुुुरुषसहित तीन जनाको उक्त सङ्क्रमणबाट मृत्युु भइसकेको बताइएको छ । मकवानपुरमा हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या २६० पुगेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म चार हजार ३४ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखापरेको छ ।
प्रदेशमा ७३४ जना कोरोना सङ्क्रमित उपचारपश्चात् घर फर्केका छन् । सङ्क्रमितमध्ये धेरैको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुुसार कोरोना सङ्क्रमण जनस्तरमा फैलिन थालेपछि प्रदेश सरकारले कोरोना जाँच गर्ने दायरा बढाएको छ । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा सङ्क्रमित फेला परेकाले कडाइ गरिएको छ ।
यसैबीच कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि हेटाँैडामा जारी गरिएको निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण हेटौँडालगायत आसपास बजार पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले कोरोना जनसमुदायमा फैलिन थालेपछि यही भदौ ९ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताउनुभयो ।
मकवानपरमा सामरीखोलाले बगाएर ५७ वर्षीय व्यक्तिको आज मृत्य भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मकवानपरगढीका अनुसार मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं ३ का ५७ वर्षीय लालबहादुर सुनारको आज खोलाले बगाएर मृत्य भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । मकवानपरगढीको डुम्रेकुनामा दूध पु¥याएर फर्किन लागेका सुनारलाई खोलाले बगाएको थियो । शव परीक्षणका लागि हेटाँैडा अस्पताल पठाइएको बताइएको छ ।